Fa maninona no najanon'i Apple ny fanomezana freebies 12 andro? | Vaovao IPhone
Nandritra ny enin-taona dia nanolotra i Apple 12 andro fanomezana ao amin'ny iTunes Store mandritra ny vanim-potoanan'ny Noely, na izany aza, dia toa voamarina mazava tsara fa amin'ity taona ity dia tsy hanana izany fampiroboroboana izany isika.
Toa manamarina izany ny loharano azo antoka ao amin'ny tontolo MacWorld, fa ahoananahoana no nijanona tsy nanolotra an'ity fampiroboroboana ity i Apple Firy taona izay no niaraka tamintsika?
Ny antony, na dia tsy ofisialy aza, dia mety samy hafa. Ilay voalohany dia manondro fanomezana izay matetika tsy dia toy izany. Azafady azavaiko, amin'izao fotoana izao dia misy fampiharana an-jatony izay nampidina ny vidiny nandritra ny vanim-potoanan'ny Krismasy ary mahazatra ny mahita ny fomba nanomezan'ny Apple antsika ny sasany tamin'izy ireo. Maninona no manome zavatra tena mandany telo na efatra andro maimaim-poana? Tsy nisy dikany izany.
Ny antony faharoa dia mety misy ifandraisany fitarainana mitohy avy amin'ny mpampiasa momba ny fanomezana Apple. Marina fa ny kalitaon'ny entana ao anatin'ity fampiroboroboana ity matetika avela ho tadiavina, na izany aza, ny tabataba niforona tamin'ny famoahana ny rakikira farany U2 ​​dia mety ho ny nahatonga ny 12 andro fanomezana tsy hita. Na dia maro aza no tsy tia an'izany Apple dia nampiditra an-tsokosoko ity kapila ity tamin'ny kaontin'ny mpampiasa rehetra, tsy dia mahazatra loatra ny mahita orinasa miala tsiny noho ny fanomezany. Raha etsy ambony no ampianay ny kalitao ambany izay nampiavaka ny fampiroboroboana, dia efa voavaha ny fanontaniana.
Mahalana no mihemotra amin'ny fanapahan-keviny i Apple tsy azo inoana fa ho hitantsika ny fampiroboroboana fanomezana 12 andro amin'ny herintaona, farafaharatsiny mba tsy ho hitantsika izany satria natsangana teo aloha izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Fa maninona no najanon'i Apple ny fanomezana freebies 12 andro?
Silber Gasteiz dia hoy izy:
Tena faly tamin'ny fanomezana aho. Raha tadiavinao tsara izy ireo ary raha tsy izany dia tsy misy. Ho an'ny maresaky ny vahoaka, mandoa ...
Valiny tamin'i Silber Gasteiz
fialofana dia hoy izy:
Eny, mahasosotra ahy izany hoe tsy nanome fanomezana intsony izy ireo. Roa taona lasa izay dia afaka nanao tamin'ny kilaoty fohy roa tamin'ny Toy Story aho, tamin'ny taon-dasa niaraka tamin'i Gru, ary koa tamin'ny entrera sarimihetsika avy any Solo en Casa. Izany dia mitranga amintsika noho ny tabataba izay mitaraina amin'ny fanomezana omena azy ireo.
Ianao ve adala? Ny fampidinana azy amin'ny Internet araka ny soso-kevitrao dia manodikodina ary eto Apple dia nitantana tamin'ny fomba hanomezana azy.
Amin'ny soavaly fanomezana dia aza mijery ny nifiny
Ho ahy dia ho tsara raha nanome HUGO toy ny nataony tany amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao izy ireo, sarimihetsika tena tsara sy ilay Sountrack miaraka amina feo lehibe toa an'i ZAZ 😊
AlexWolf dia hoy izy:
Tsy hisy tsy hahita azy tokony ho niantso 12 andro 12 izy ...
Valiny amin'i AlexWolf
Heveriko fa nandao "12 andro ho fanomezana" izy ireo satria izao dia mihazakazaka "App of the Week" ary maro amin'ireo fampiharana maimaim-poana ireo no tena iray amin'ireo fampiharana 12 ireo.
Ireo widgets tsara indrindra ho an'ny iOS 8 an'ny 2014